Wacyi gelin looga hadlayo amaanka oo laga bilaabay Boosaaso – Radio Daljir
Wacyi gelin looga hadlayo amaanka oo laga bilaabay Boosaaso
Bosaso, May 10 -Waxaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari laga bilaabay ollole wacyi gelin dhinaca amaanka oo laga fulinayo xeryaha barakacayaasha Boosaaso, iyadoona ay ay fulinayso daladda ay ku midaysanyihiin odayaasha gobolka Bari ee BEN.
Wacyigelinta ayaa laga sameynayaa xeryaha ay deganyihiin dadka kasoo barakacay colaadaha ka jira dalka Soomaaliya qaybo ka mid ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso.
Nabadoon Abshir Idiris oo ka hadlay siminaarka wacyi gelinta ah ee looga hadlayo amaanka ayaa ku dheeraaday ka hadalka faa?iidada ay nabaddu u leedahay shacabka, isagoona kula dardaarmay dadkii tababarka loo furay ka shaqaynta nabadgalyada iyo dhowrista amaanka.
?Waan sii wadaynaa nabdgelyada iyo la kulmidda dadka ? ayuu yiri nabadoon Abshir Idiris oo intaasi raaciyay in dadka kasoo cararay colaadahaha dalka inay la simanyihiin dadka deegaanka, maadaama ay nolol usoo raadsadeen goobaha xasiloon ee dalka.
Nabadoon Cabdiqaadir Axmed Xarago ayaa isaguna dhankiisa ayiday go?aanka ah shacabka Soomaaliyeed inay simanyihiin, islamarkaana looga baahanyahay kaliya inay si wadajir ah ay meel uga soo wada jeestaan amaan darida.
Gudoomiyaha guddiga amniga ee golaha deegaanka degmada Boosaaso Mursal Maxamuud Yuusuf ayaa waxaa uu dhankiisa sheegay xiriiro joogto inay leeyihiin dowladda hoose iyo dadka colaadaha sokeeye ee dalka kasoo cararay kuna sugan magaalada Boosaso.
Waxaa uu xildhibaanka uu ku? adkeeyay shacabka inay xoojiyaan amaanka, islamarkaana ay wada shaqeyn la sameeyaan ciidamada amniga.
Yuusuf Faarax Cali oo ah xiriiriyaha daladda odayaasha gobolka Bari ee BEN oo fulinaysa mashruucan ayaa tilmaamay kulamadan inay sii joogteeyaan.
Tababarkan ayaa la filyaa inuu socda ilaa 15-ka bishan, waxaana maal gelinaysa hay’adda qaxootiga caalamka u qaabilsan ee UNHCR.